Malunga nathi -Binzhou Bangyi Metal Products Co., Ltd.
I-Binzhou Bangyi Metal Products Co, Ltd. yasekwa ngo-2010 eBinzhou, idolophu yesango lezorhwebo laseShandong. Umzi-mveliso ugubungela ummandla weemitha zesikwere ezingama-10,000. Inkampani inendawo ephezulu ngokwendawo, kufutshane neQingdao Port. I-Binzhou Bangyi Metal Products Co, Ltd.kuyinto eyodwa yokumisa imveliso yokudibanisa imveliso, iR & D, ukuthengisa kunye nenkonzo. Ineqela lolawulo lobungcali kunye neqela le-R & D eliqolileyo, kwaye iya kuphehlelela iimveliso ezintsha 1-2 inyanga nenyanga. Eyona mveliso iphambili yentsimbi yentsimbi esisangqa intambo, intsimbi engatyiwa intambo yocingo kunye neplastiki yentsimbi yentsimbi ucingo intambo, kwaye ingavelisa iinkcukacha ezizodwa ngeentsimbi zentsimbi ngokweemfuno zabathengi. Ezi mveliso zilapha ngasentla zisetyenziswa ngokubanzi kulungiselelo lwezinto, amazibuko, ulwakhiwo, umtya wokuloba, ukuloba, ulwakhiwo, ezothutho kunye namanye amashishini.
Inkampani ivelisa ngokungqongqo ngokungqinelana ne-GB, ISO, DIN, JIS, AISI, ASTM, ISO9001-20000 imigangatho esemgangathweni yamazwe aphesheya. Umgangatho wemveliso uzinzile kwaye unokwethenjelwa, kwaye uphumelele abathengi abatsha nabadala ngamandla ayo aphezulu, ukuqina okuphezulu, ukungangqinelani, ukunxiba ukunxiba kunye nezinye izibonelelo. Kwiminyaka yakutshanje, iimveliso zithunyelwa eYurophu, eAfrika, mpuma Asia, kuMbindi Mpuma kunye namanye amazwe kunye nemimandla.
Inkampani iya kubambelela kwifilosofi yeshishini kunye nenjongo yokunyaniseka kunye nokuqinisekiswa komgangatho, kwaye ithathe ifilosofi yolawulo lokugxininisa kulawulo lwabantu kunye namava abathengi, ngokuthe chu ukwenza ishishini, kunye nokuthatha indlela yophuhliso oluzinzileyo njengesikhokelo, kunye nokukhuthaza iinkampani ezininzi ukuba zisebenzise iimveliso zethu. Nika abathengi ukuba basebenzise umzimba kakuhle. Sibamkela ngokunyanisekileyo abarhwebi kunye noogxa abavela kuzo zonke iinkalo zobomi ekhaya nakumazwe aphesheya ukuba beze kuphanda, babonakalise, bathethathethane ngezamashishini, badibane kwaye basebenzisane, kwaye bafune uphuhliso olufanayo kunye nokudala okuqaqambileyo.
Abasebenzi zezona mpahla zethu zixabisekileyo. Inkampani yethu ibaluleke kakhulu kwimpilo yomzimba nengqondo yabasebenzi. Ke ngoko, inkampani yethu ihlala iququzelela imidlalo yeqela, imisebenzi yokwakha iqela, ukuhamba kunye neminye imisebenzi eyonyusa umanyano, ukuthembana kunye noxanduva lweqela.
Camera Camera Intambo, Intambo yocingo lwentsimbi ngesinyithi, Intambo yocingo yePvc engenazingcingo, Intambo yecingo ye-Electro kwalenza intsimbi, China Ukwenziwa Isefu Wire Intambo, PVC Camera Isefu Steel Intambo,